I-High End Camping nazo zonke izinsiza!
Union, Connecticut, i-United States
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Karen
Le ndawo yokukhempa iyinkundla yokukhempa iRoaring Brook Co-op. Indawo yokukhempa inamachibi okudoba, i-inground pool, i-Rec hall yabantu abadala nengane, inkundla yebhola lomnqakiswano kanye nenkundla yokudlala. Ekampeni indawo eluhlaza inomgodi wokucisha umlilo, izihlalo, inqola yegalofu ukuze uzungeze yonke indawo. Ikhaya linamasofa amabili adonsayo kanye negumbi lokulala elinombhede ophelele. Indlu ine-wifi ne-tv ene-Netflix. Kanye ne-AC kanye nekhishi elinosayizi ogcwele. Woza ujabulele ngaphandle ngakho konke ukunethezeka nokunethezeka kwangaphakathi.
Indawo yokukhempa iRoaring Brook Co-op iyindawo enhle yawo wonke umuntu onokuningi ongakwenza. Kunemisebenzi isonto ngalinye ehlanganisa ibhingo, amabhendi abukhoma, kanye nenqwaba yemisebenzi yezingane! Bheka iwebhusayithi yabo ukuze uthole ulwazi olwengeziwe! Ungakwazi ukugibela kalula uzungeze inkundla yekamu ngekalishi legalofu futhi ujabulele zonke izizathu ongazinikeza. Kukhona indawo yokudlela encane emagcekeni. I-Stafford Springs inokuningi ongakunikeza nasendaweni!
Uzoyithanda ngokuphelele imizwa yedolobha elincane lase-Stafford Springs, kodwa asinaso isiqiniseko sokuthi uyoke ufune ukushiya inkundla yekamu!
Ihholo lokudlala lezingane eligcwele imidlalo yaseshashalazini nephuli. Ihholo lokudla abantu abadala kanye nekhalenda lemicimbi yawo wonke umuntu! Kubandakanya ibhingo, umculo obukhoma, nefilimu yangaphandle njalo ngoLwesihlanu.
Ichibi elimangalisayo, amachibi okudoba namachibi okubhukuda, inkundla yokudlala, inkundla yebhola lomnqakiswano, kanye nendawo yokudlela yasekamu. Sithembe...awusoze wafuna ukuhamba!
Siyatholakala nganoma imiphi imibuzo noma okukukhathazayo ngesikhathi uhlala futhi singafinyelelwa ngombhalo noma ngocingo.